लापरवाहीको दुई घटना- प्रहरीबाट चुकेको अनुसन्धान – Deurali News
देश मुख्य समाचार समाचार समाज
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०३:३० May 21, 2021
लापरवाहीको दुई घटना- प्रहरीबाट चुकेको अनुसन्धान
कतै केही घटना घट्यो भने प्रहरीले पहिले घटनाको मुचुल्का तयार पार्छ । घटनाको प्रकृति हेरेर नै घटनाबारेमा आधा जानकारी लिन सक्छ प्रहरीले । प्रहरीमा कुशल नेतृत्व हुने हो भने जस्तोसुकै घटनामा सफलता हात पार्न सक्छ ।
तर, कास्कीका २ घटनाले भने केही फरक संकेत गर्छन् । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले २ घटनामा कमजोर प्रस्तुति दिएको प्रष्ट भएको छ । कास्की प्रहरी एउटामात्र घटनामा चुकेन जीवनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको कास्की प्रहरीे २ घटनामा चुक्न पुग्यो । दुवै घटनालाई प्रहरीले सामान्य लियो । तर दुवै घटना गम्भीर अपराध प्रमाणित भए ।
घटना १ : महतगौंडा गोली प्रकरण
गत वर्ष माघ २३ गते साझँ करिब ७ बजेको समयमा पोखरा १७ महतगौंडा नौलो घुम्ती नजिक मनोज विकलाई एक अपरिचित व्यक्तिले गोली प्रहार गरी घाइते बनाए । पेटमा गोली लागेको विक घाइते अवस्थामै वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम पुगे । विकले आफूमाथि गोली लागेकोसमेत जानकारी गराए ।
तर, प्रहरी गोली प्रहार भएको भन्ने मान्न तयार भएन । ढोरपाटन दैनिकमा गोली प्रहार भएकोबारे समाचार प्रकाशन भइसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की प्रवक्ता सुवास हमालले गोली होइन भनेर जिकिर गरिरहे । गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारत विकलाई गोली प्रहार नै नभएको ‘नक्कली रिपोर्ट’ तयार पारियो । सोही रिपोर्ट देखाउँदै समाचार नै झुटा सावित गर्ने कोसिससमेत भए ।
तर, पीडित विक स्वयं आफूमाथि गोली प्रहार नभएको मान्न तयार थिएनन् । बारम्बार गोली लागेको बताइरहे । प्रहरीले घटनालाई सामान्य लिँदा सुटर सहजै फरार भए । आरोपीको सम्पूर्ण हुलियासहित विकले उजुरी दिँदासमेत प्रहरी ‘गोली होइन’ भन्ने पक्षमै उभियो । यदपि पछि प्रहरी आफैं पत्रकार सम्मलेन गर्दै गोली नै भएको स्वीकार्न बाध्य भयो ।
घटना २ : नुभिवको शवमाथि गम्भीर खेलाँची !
वैशाख ४ गते पोखरा फेवातालस्थित बाराही मन्दिर नजिकै एक युवकको शव फेला प¥यो । तालमा तैरिरहेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । उक्त शव नेपाली सेनाको टोलीले निकालेको थियो । फेवातालमा फेला पर्ने अधिकांश शवलाई आत्महत्या नै बताउने प्रहरीले उक्त शवको मुचुल्का तयार पार्दासमेत आत्महत्या नै बतायो । शव काडमाडौंका १८ वर्षीय नुभिव उप्रेतीको रहेको खुलेको थियो । यद्यपि अहिले उप्रेतीले आत्महत्या गरेको नभई कुटपिटबाट हत्या भएको खुल्न आएको छ ।
दुवै घटनालाई सामान्य लिएको कास्की प्रहरीको लागि घटनाले नेतृत्व मै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । घटना १ र २ दुवै वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम मातहतमा हो । तर, जिल्ला प्रहरी कास्कीको नेतृत्व गर्ने एसपीसहितको टोली अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ ।
उप्रेतीको शव फेला पर्दा आत्महत्या बताइएको घटनामा हत्या भएको खुलासा भयो । हत्या आरोपमा ३ जना पक्राउ परिसकेका छन् । घटनाको एक महिना पश्चात प्रहरी पक्राउ गर्दै अदालत पेश गरेको छ । तालमा फेला परेको शव हेर्दा आत्महत्या नभई हत्या भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । उनको घाँटीमा दाग, तीघ्रा, गुप्तांगमा रगत, टाउकोमा चोटसमेत थियो ।
जताततै चोट देखेपछि परिवारले हत्या गरी फालेको भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे । वडा प्रहरी कार्यालय वैदाममा जाहेरी दिए, वडाले जाहेरी लिन मानेन । शव काडमाडौं लगियो । एक हप्तापश्चात उनका आफन्त फेरि पोखरा आई हत्या नै भएको भन्दै जाहेरी दिँदा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामकी चिनिमाया तामाङले आत्महत्या नै भएको भन्दै उजुरी लिन मानिनन् ।वडामा जाहेरी दर्ता नभएपछि परिवारले लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । जिल्लामा उजुरी दर्ता भएपछि बल्ल प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढ्यो । अन्ततः सफलता हात पा¥यो । शव फेला परेको करिब ३ घण्टा अघिमात्र लेकसाइडको गल्ली नं. १३ को बीच सडकमा झगडा भएको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भयो ।दृश्यमा एक युवालाई केही युवाले निर्घात कुटपिट गरेको पाइयो । सोही फुटेजका आधारमा प्रहरीले ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्रउ पर्नेमा खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका २ घर भई पोखरा ७ घारीपाटन बस्दै आएका १८ वर्षीय आशिष राई, स्याङ्जा फेदीखोला २ घरभई सोही स्थान बस्दै आएका १८ वर्षीय विगेन गुरुङ र स्याङ्जा अर्जुनचौपारी ६ घर भई सोही स्थानमा बस्दै आएका १९ वर्षीय वासुदेव गुरुङ पक्राउ परेका हुन ।झडप भएको स्थान टे«जर लाउन्जको फुटेज लुकाइयो: आमामृतक नुभिव उप्रेतीका आमाले हत्या भएको ठाउँको सिसिटिभी फुटेज लुकाएको दाबी गरेकी छन् । उनले जेठको १ गते आफ्नो फेसबुकमा राति ९ बजेर २ मिनेट जाँदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै झडप भएको स्थान ट्रेजर लाउन्जको सिसिटिभी फुटेज लुकाएको बताएकी हुन ।विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा ६, बाराही मन्दिर मार्गको ५० मिटर तल नेपाल आर्मीले उद्धार गरी निकाली यस वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम प्रहरीलाई मिति २०७८।०१।०४ गते शनिबार पुर्वान्ह ६ः४५ बजे मा जिम्मा लगाएको मृतक नुभिव उप्रेती मेरो छोराको लास बुझ्न जाहेरी लिई जाँदा लासको प्रकृति हेरी उनको रहस्यमय हत्या भएको देखिएको आवश्यक अनुसन्धान गरी तथ्य पत्ता लगाई सहयोग गरिदिनुहुन सबैमा अपिल गर्दछौं ।’मृतककी आमाले थप उल्लेख गरेकी छन्, ‘हाल ज्यान सम्बन्धी कसुरको मुद्धा नं. १८३, वडा प्रहरी कार्यालय कास्की बैदाममा दर्ता भएको मेरो छोराको मिति २०७८।०१।०४ का दिन लेकसाइडमा मरनासन्न गरी पिटी तालमा लगि डुबाई मारेको, तर डुबी मरेको भनी घटना लुकाउन खोजेको । अहिले कुटपिट गरी मार्ने ३ जना हिरासतमा रहेको भएतापनि हामीलाई प्राप्त थप जानकारी दिन खोज्दा आलटाल गरी गल्ती ढाकछोप गर्न लागेको ।’उनले शवको प्रकृति हेर्दा छोराले कोखामा हात राखी छेकेकोजस्तो गरी मुट्ठी पारेकाले हत्या भन्ने ठहर भएको बताइन् । उनले अनुसन्धान नै नगरी आत्महत्या नै हो भन्दै २ पटकसम्म आवेदन लिन नमानेको र पछि अनुसन्धानबाट हत्या भएको पत्ता लागे पनि कारण भने लुकाइएको आरोप लगाइन् । उनले ट्रेजरको वैशाख ३ गते राति ९ बजेदेखि वैशाख ४ गते विहान सम्मको सिसिटिभी खोजी गरी पाउनुपर्ने मागसमेत राखेकी छन् ।अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेला पर्ने हो: एसपी श्रेष्ठजिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले घटनाको सुरुआतमा सबै कुरा थाहा नहुने बताउँदै अनुसन्धान गर्दै जाँदा बाहिर आउने बताए । उनले आफूहरुले आत्महत्या भएको नबताएको जिकिर समेत गरे । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले आत्महत्या बताइरहँदा समेत उनले त्यसो नभनेको बताए ।उता, महत गौडा प्रकरणमा समेत गोली हैन भन्दै पहिला ठोकुवा गरेपनि अहिले भने डाक्टरको कुरा बताएको भन्दै तर्किए । ‘पहिले गोली हैन भनेर भन्नु भयो । पछि अर्को हत्या घटनालाई आत्महत्या भनिदिनु भयो । आखिर दुवै घटना अपराधिक पृष्ठभूमिको रहेको पुष्टि भयो नि ?’ प्रश्न गर्दा एसपी श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त्यसो भनेकै छैनौं । महतगौंडा गोली प्रकरणमा डाक्टरले जे भन्यो त्यही भनेका हौं । दोस्रो पटक जाँज गर्दा बल्ल गोली भएको पुष्टि भएको हो । अर्को घटनामा हामीले आत्महत्या भनेका छैनौं ।’हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका ३ जनालाई नै अदालतमा पेश गरिसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कानुनतः सबै कुरा बताउन मिल्दैन हामीले अदालतमा बुझाएका छौं । अब अदालतले नै गर्छ,’ उनले भने । ढोरपाटनबाट
गीतकार बिष्णु खरेलको ‘एक्लो साँझ’ सार्बजनिक(भिडियो सहित)
मुनलाईट टेलिभिजनका निर्देशक नवराज कार्कीद्वारा सहयोग
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०८:४४ Deurali News 0
मोडल मनीषा सापकोटा अभिनित “मनको कुरा” सार्बजनिक(भिडियो सहित)
७ माघ २०७५, सोमबार ०५:५५ Deurali News 0
नेकपामा पोलिटब्युरो गठन हुँदै
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार ०५:४७ Deurali News 0